कांग्रेसमा को–को बन्ने भए मनोनित पदाधिकारी ? – www.agnijwala.com
कांग्रेसमा को–को बन्ने भए मनोनित पदाधिकारी ?
यसरी अघि बढ्दैछन् देउवा,
सभापति शेरबहादुर देउवाको सात्तो लिनसक्ने एकमात्र नेता थिए, स्व. खुमबहादुर खड्का । खड्का देउवाभन्दा सिनियर र उनका हरेक निर्णयका एक भागीदार थिए । भ्रष्टाचारको लेप लागे पनि खड्काले कांग्रेसभित्रको राजनीतिक वर्गमिटरमा आफुलाई उभ्याउने क्षमता राखेका थिए ।
देउवाले हिजो पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष रहँदाको भोगालाई पार्टी सत्ता हातमा आएपछि अन्यलाई पनि अनुभूत गराइरहेको टिप्पणी कांग्रेसबारे जानकारहरू बताउँछन् । देउवामा गुनासा भन्दा केही नसुन्ने र निर्णय आफैंले लिने प्रवित्ति रहेकाले बाहिर कराउने र भित्र डराउनेहरूका मागको सम्बोधन हुन नसक्ने प्रष्टिन्छ । तर उनले महासमिति बैठक आह्वान गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।दैनिक नेपाल बाट